Maanso: Ma is baran karaynaa? - BAARGAAL.NET
barasho hees maanso murti Suugaan
Maanso: Ma is baran karaynaa?
✔ Admin on January 31, 2015
Tixdan waxaa hal-abuuray Abwaan Ismaaciil Cabdi Nuur oo ah abwaan maansooyin oo dhallinyar kaas oo ku muujinaya hawraartiisa heerka maantay la joogo iyo waxa ay haweenku ku qiimeeyaan wiilka ay nolosha la qaadanyaan,
runtii waa tix si afshaxanimo leh ay isugu waydaarsanayaan ereyadeeda habka hal-abuurku u dhigay gabar iyo wiil dhallinyaro ah oo haase wadaag bilowgii taagan, taas oo gabadhu ay dookheeda ka hor duunyo iyo diinaar waydiiso, waa sida uu abwaanku u dhigaye.
waxaanu ku bilaabay tixda abwaanku sidan:
ma ogtahay barwaaqooy
badda iyo berriba maray
inta bilic haweenliyo
beerihii jannada oo
isku soo burqadayeey
ma is baran ka raynaa?
haddaad moodday baashaw
baadi doonku kelidaa
inuu baadi kugu yahay
inta beled aad sheegtiyo
buur iyo bannaan maray
waxaad tahay nin boqoree
waan is baran karaynaa
inaan ahay bukaan socod
bil kastoo la joogaba
sheeko ii bilaabaan
anna aan isbaayaco
waxaad tahay mid bilic lee
yaa boqol hallaad iyo
baar-qabkoodi kaa tuba
waxaad tahay nin boqoroo
aan boqol hallaad bixin
dhulkoo beri samaadkii
lagu jiro baraariyo
biyo dahab la moodyeey
waynu sii balamaynaa
beri iyo bil waa kee?
ballankii wuxuu yahay
birta lagama maarmee
baabuur ma leedahay?
wax bakeeri lagu shubo
bilaalana ma haystee
ma is baayacaad baa?
birta lagu xamaashiyo
wax bilaale lagu shubo
baashaw ma hayside
bay baay inaadeer.